Saya Khin Maung Oo: တရံရောအခါကမြန်မာပြည်မှာ (၁၁)။
Saya Khin Maung Oo
Myanmar Maritime Education & History.
သွားထိုးရသည့်အခါလည်း ရှိသည်။နံနက်အလံတင်ကွင်းတွင်ဒိုင်ဗင်ထိုးသည့်အထဲလဲပါသည်။တာဝန်မှူးကြီးရုံးခန်းတွင်လေးလက်မ ကျည်ဆန်ကြီးကိုလဲထမ်းပြီးအကြိမ်လေးဆယ်ထိုင်ထလုပ်ခဲ့ ဘူးပါသည်။တခါကလမ်းလျှောက်တာမညီညာ သောကြောင့်တပ်ဖွဲ့ လိုက်တနာခွဲခန့် အပြေးတက်ကြရပါသည်။
ဒုတိယနှစ်တွင်ရေတပ်ဗိုလ်လောင်းအဖွဲ့ ၁/၆၅ နှင့်အတူပင်လယ်ပြင်လေ့ကျင့်ရေးထပ်ထွက်ကြရပါသည်။ ဤတခါမှာ Navigation လက်တွေ့ လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ နှင့်ဆရာဝင်းဒင်လိုက်ပါသည်။ ရေတပ် ဗိုလ်လောင်းအဖွဲ့ကမူ Engineering Knowledge အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
စနေနေ့သည် ပုံမှန်ဆိုလျှင် ကမ်းတက်ခွင့် ရှိသောနေ့ ဖြစ်ပါသည်။
ကမ်းတက်ခွင့်တောင်းသော်လည်းမရပါ။တာဝန်ကျအရာရှိမှာ ရေတပ်ဗိုလ်လောင်းတပ်ဖွဲ့ ၁/၆၃မှဖြစ်သောကြောင့်ထင်ပါသည်။ဆိပ်ကြီးဗိုလ်လောင်းဆောင်တွင်တူတူနေစဉ် ထဲကကြည့်မရတာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
နောက်တစ်နေ့ မိုးလင်းသည်နှင့် ရန်မျိုးအောင် ပေါ်တွင် နံနက်ချိန်ခါ တေးသံသာ ပါတော့သည်။ တရားခံကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်လောင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်လောင်းများ အလံတင်ရာတွင် ပေါ်မလာ သောကြောင့် စစ်ရေယာဉ်မှူး ဗိုလ်မှူးညွန့်အောင်က အားလုံးကို တန်းစီစေပြီး ဆူပူ ဟိန်းဟောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိပ်ကြီး ရေတပ် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၌ တနင်္ဂနွေ နံနက်ဆိုလျှင် သင်တန်းသားများ အလံတင်သော ထုံးစံမရှိခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော်တို့ သတိလစ်သွားကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ အစ(First Impression) မကောင်းခဲ့ သော်ငြား သင်္ဘော ထွက်သောအခါ တွင်တော့ ကျွန်တော်တို့ တပ်ဖွဲ့ကို Bridge ပေါ်သို့ ခေါ်ပါသည်။ မြစ်တွင်း သင်္ဘော သွားလာပုံကိုလည်း သေသေချာချာ ရှင်းပြ ပါသည်။ Buoy တွေအကြောင်း၊ Transit တွေ အကြောင်း၊ ရေ အတိမ်အနက်နှင့် ရေစီးကြောင်းများ အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤတွင် ဆိပ်ကြီးကျောင်းမှ သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် ကြယ်ကြီး ငါးလုံး (မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောလုပ်ငန်း) သို့ ရောက်ရှိ နေကြသော ကျွန်တော်တို့၏ စီနီယာ အရာရှိလောင်းများ ဖောက်သည် ချသည်ကို သတိရမိ ပါသည်။ သူတို့ထဲမှ အရာရှိလောင်း တစ်ယောက်သည် Chart room ထဲတွင် ကြမ်းတိုက်နေရင်း Chart ကို လှမ်းကြည့် မိသည် ကို Chief Officer မှ မြင်သွားသော အခါ ပြောပုံကလေး ဖြစ်ပါသည်။ Chief Officer မှ Cadet အား "Cadet that's not to your standard (အဲဒါ မင်းအရာ မဟုတ်ဘူး) " ဟူ၍ ဆိုခဲ့ပါသတဲ့။ ထိုစဉ်က ကြယ်ငါးလုံး အရာရှိကြီးများ၏ စေတနာ ထားပုံ ကလေးတွေ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ တတွေသည် တာဝန်ကျချိန်တွင် Compass Error စစ်ဆေးခြင်း၊ Compass များ ညွှန်ရာ ကွာခြားမှု နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ သင်္ဘော တည်နေရာ (Ship Position Fixing) ရှာခြင်း များကို ပြုလုပ်ခွင့် ရပါသည်။ တာဝန်ကျ အရာရှိမှ သူ လုပ်စရာ ရှိတာ သူ့ ဘာသာသူ လုပ်နေသလို၊ လေ့ကျင့်သူ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဘာသာ သီးသန့် လုပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ Radar ကိုလည်း သုံးခွင့်ပြု ပါသည်။
စစ်သင်္ဘောတွင်တာဝန်ကျအရာရှိကအမိန့်ပေးပြီးရဲဘော်များအကုန်လုပ်ပါသည်။ Radar ဖွင့်ပိတ်တာ၊ Chart ရွေးတာ၊လဲတာ၊ Chart ပေါ်သင်္ဘော Position plot လုပ်တာ၊ Flashing သို့မဟုတ် အလံဖြင့် signal ပို့ တာအကုန်ရဲဘော်များလုပ်ကြပါသည်။ Bridge ပေါ်တွင်အမိန့် ပေးတာအားလုံးမြန်မာလိုဖြစ်ပါသည်။ ဦးတည်လမ်းကြောင်း (Course) ပြောရာတွင်"တစ် "နှင့် "နှစ်" မှားမှာစိုးသောကြောင့်၊တစ်ကို"တယော"၊နှစ်ကို"နီလာ"ဟုသုံးပါသည်။ကျွန်တော်တာဝန်ကျသောအချိန်တွင် မှတ်သားဖွယ်အဖြစ်အပျက်တခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ ပါသည်။
ကော့သောင်းမှ မြိတ်သို့အသွား မြိတ်ကျွန်းစု ထဲတွင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်နှင့် ဆရာဝင်းဒင်မှာ Bridge ပေါ်တွင် Ship Position Fix လုပ်နေကြ ပါသည်။ Altering point (ဦးတည် လမ်းကြောင်း ပြောင်းရန် သတ်မှတ် နေရာ) ရောက်သောအခါ တာဝန်ကျ အရာရှိမှ "ဦးတည် လမ်းကြောင်း သုံးငါးသုည" ဟု အမိန့်ပေး ပါသည်။ အောက်ထပ်ရှိ တက်မခန်းမှ တက်မကိုင် ရဲဘော်က သူကြားသည့် အတိုင်း "ဦးတည် လမ်းကြောင်း သုညငါးသုညပါ ဗိုလ်ကြီး" ဟု
ပြန်အော် ပါသည်။ တာဝန်ကျအရာရှိသည် အမိန့်ပေးပြီးသည်နှင့် အခြားကိစ္စတစ်ခုကို သွားလုပ်နေခဲ့ ပါသည်။ ရဲဘော်က ထုံးစံအတိုင်း ပြန်အော်ပြီး အတည်ပြုချက် ယူခြင်းကိုလည်း ဆုံးအောင် နားမထောင်၊ လုပ်ဆောင်ချက် မှန်မ မှန်ကိုလည်း စောင့်၍ ကြည့် မနေခဲ့ပါ။ တက်မကိုင် ရဲဘော်ကလည်း သူနားလည်သည့်အတိုင်း (၀၅၀) သုိ့ ဦးတည် လမ်းကြောင်းကို လှည့်ချလိုက် ပါသည်။
သင်္ဘောဦးကား သွားရမည့် လမ်းကြောင်း၏ ညာဖက်သို့ ဒီဂရီ ခြောက်ဆယ်အထိ ကျော်ထွက် သွားသည်။ သင်္ဘောသည် "Three sisters" ကျွန်းဆီသို့ တည့်တည့်ကြီး ဦးတည်သွားနေခဲ့ ပါသည်။ ၎င်းကျွန်းသည် ကျောက်ဆောင် အလွန်ပေါသော ကျွန်းဖြစ်သည်။ တာဝန်ကျအရာရှိကား သင်္ဘောဦးကို ယခုအချိန်ထိ ခေါင်းမော့၍ မကြည့်သေးပါ။ စားပွဲနားတွင်ပင် ကုန်းကုန်း၊ ကုန်းကုန်းဖြင့် အလုပ်တွေ များနေ ခဲ့သည်။ သိပ်မကြာပါ။ ပထမဆုံး ကျွန်တော်က သတိပြုမိပါသည်။ သို့နှင့် ဆရာဝင်းဒင်အား သင်္ဘောရှေ့တွင် ကျွန်းကြီး ရှိနေကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ ပါသည်။ ဆရာဝင်းဒင်မှ တာဝန်ကျအရာရှိကို ပြောနေစဉ် တစ်ချိန်တည်းပင် ဒုစစ်ရေယာဉ်မှူး ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူး Masters ပြေးတက်လာပြီး "တက်မဝဲဆုံး (Hard a' port)" ဟု အမိန့်ပေးလိုက် ပါသည်။ ကံကောင်းပေစွ။ အကယ်၍သာ ကျောက်ဆောင်နှင့် တိုက်မိပါက စစ်သင်္ဘောကြီး သေချာပေါက် ပေါက်ကွဲမည် ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့လည်း အသက်ရှင်ဖို့ မလွယ်ပါချေ။
ဤအဖြစ်အပျက်မှ ရခဲ့သည် တစ်သက်လုံး မှတ်မိနေသည့် သင်ခန်းစာမှာ မြန်မာလို "သုံး" နှင့် "သုည" မှာ နားကြား လွဲနိုင်သည် ဆိုသည် လေးတင် မကပါ။ တာဝန်ကျ အရာရှိဟူသည် မိမိပေးသည့် အမိန့်ကို တက်မကိုင် နားလည် မလည်၊ ကြား မကြား၊ အမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်မှု ရှိ မရှိကို အမြဲ ဆန်းစစ် နေရန်နှင့် သင်္ဘော ဦးတည် လမ်းကြောင်း ပြောင်းတိုင်း သွားရမည့် လမ်းကြောင်းသစ်တွင် သင်္ဘောဦး အခြေကျ တည်ငြိမ် သွားသည် အထိ အခါမလပ် စောင့်ကြည့်နေရန် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာများကား ပြောလျှင်လည်း မကြိုက်သလို အလုပ်တွင် စည်းကမ်းလည်း အလွန်မဲ့ကြသူ များလည်း ဖြစ်ကြပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အသိ (Safety Awareness) အလွန် နည်းကြသည်။ လိုအပ်သည်များကို သတိပေးလျှင်လည်း “မလိုပါဘူး၊ လုပ်နေကျပါ” ဟုသာ ဆိုသည်က များ၏။ “ကြောက်လို့လား” ဟူသည်က နောက်ဆက်တွဲ ပါလာသေးသည်။ အမှန်စင်စစ် မြန်မာ သင်္ဘောသားများ မတော်တဆ ဖြစ်ကြ၊ ဆုံးပါးသွား ကြသည်မှာ သင်္ဘောလိုက်သူ ဦးရေနှင့် တွက်ချက်၍ ရာခိုင်နှုန်းအရ ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အလွန်များ ပါသည်။ ကျောက်ချထားစဉ် သင်္ဘော၏ ပဲ့ရေစူး (Aft Draft ) ကို ဆင်းဖတ်ရင်း ရေထဲကျ သေဆုံးသူများ၊ Tank Sounding ကို သေသေချာချာ မတိုင်းဘဲ ညာတာ များသောကြောင့် ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ အလယ်တွင် သင်္ဘော ဗိုက်ပေါက်၍ ရေဝင်သည်ကို မသိလိုက်ဘဲ ညအိပ်ချိန် သင်္ဘောမြုပ်ရာတွင် ပါသွားသူများ၊ Chemical Tanker များတွင် လိုအပ်သော အကာအကွယ် မယူဘဲ tank ထဲ ဆင်းသောကြောင့် သေကျေ ပျက်စီးသူများ၊ မသန်မစွမ်း ဖြစ်ကုန်သူများ၊ ဒဏ်ရာ ရသူများ စသည် စသည်ဖြင့် အများကြီး ရှိပေသည်။
ထိုအခေါက်က ရန်မျိုးအောင်နှင့် စီး၍ တိုင်းခန်းလှည့်လည် ခဲ့ကြသော ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်လောင်းအဖွဲ့ သည်ကား ကိုကိုးကျွန်း၊ ပုလဲကျွန်း၊ လန်ပီကျွန်း၊ ဗင်တစ်ကျွန်းနှင့် အခြား မြိတ်ကျွန်းစု အပိုင်ကျွန်းများကို အတော်လေးပင် စုံစုံလင်လင် ရောက်ခဲ့ ပါသည်။ ရောက်ခဲသော နေရာများပင်။
Posted by SayaKMO at 7:18 PM
Graduation Day, 9th April, 1966.
At Concord, California, 2010.
Latest Photo in Yangon, December 2010.
တရံရောအခါက မြန်မာပြည်မှာ (၉) ။
တရံရောအခါက မြန်မာပြည်မှာ (၈)။
တရံရောအခါက မြန်မာပြည်မှာ (၇)။
UBS Yan Myo Aung 1965.
Before going to Judo class, Cadets Mess, 1965.
တရံရောအခါက မြန်မာပြည်​မှာ (၆)
တရံရောအခါက မြန်မာပြည်မှာ (၅)
တရံရောအခါက မြန်မာပြည်မှာ (၄)
Mercantile Marine Cadets (Deck) 1st batch 1963
Bentick Island, Mergui Archipelago, 1965
တရံရောအခါက မြန်မာပြည်မှာ (၃)
Cocoa Kyun Bullock cart ride, 1965.
Cocoa Island 1965.
Sea training on board UBS Yan Myo Aung, 1965.
Mercantile Marine Cadets (2nd Batch 1964)
တရံရောအခါက မြန်မာပြည်​မှာ (၁)